एकै मण्डपमा चन्दुले गरे दुई प्रेमिकासँग विवाह ! « Lokpath
काठमाडौं । विवाहका सन्दर्भमा बेला बेला नयाँ नयाँ रोचक कुराहरु सार्वजनिक भइरहेको छन् ।
माया यस्तो चिज हो युवा वा युवतीेले आफूले मन पराएको मानिसलाई अरुले मन पराएको देख्न सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: २०७८,भाद्र,२४,बिहीवार २२:२१
मोडलले आँखामा बनाइन् ट्याटू, सानो गल्तीले गुम्यो आँखाको ज्योती
काठमाडौं । पोल्याण्डकी एक मोडललाई आँखामा ट्याटू बनाउनु नै जीवनको लागि घातक सिद्ध भएको छ । पोल्याणकी मोडल एलेक्जेन्ड्रा सडोब्सका
यी चर्चित मोडल जसको टाउकोमा न त कपाल छ न मुखमा दाँत !
काठमाडौं । मोडल भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा लामोकपाल चट्ट मिलेका दाँत, आदि आँउछ । तर आज हामी यस्तो मोडलको कुरा गर्दै